Clear ကိုပလတ်စတစ် PVC Box ကိုစက်ရုံပေးသွင်း & လက္ကားထုတ်လုပ်သူများကတရုတ် - ALPPM
Clear ကိုပလတ်စတစ် PVC Box ကိုစက်ရုံပေးသွင်း & လက္ကားထုတ်လုပ်သူများကတရုတ်
အပေါ် Posted ဧပြီလ 18, 2018 July 3, 2019 အားဖြင့် ALPPM
11. ကျနော်တို့ထဲကအဲဒီမှာထိပ်တန်း PVC သေတ္တာစက်ရုံတစ်ခုမှာနေ
32. ကျွန်ုပ်တို့၏ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းများတစ် Fortune မဂ္ဂဇင်းကုန်ကျစရိတ်မနေပါနဲ့
43. ကျွန်ုပ်တို့၏ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များ, တာရှည်ခံရေစိုခံခြင်းနှင့်အလင်းအလေးချိန်ရှိပါတယ်
54. ကျွန်ုပ်တို့၏ PVC သေတ္တာစက်ရုံတွင်အမြဲဆုံးအကူအညီဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုရှိ
6နဲ့အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ 5. ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းသွက်
သူတို့ကအကောင်းဆုံးတစ်ဦးclichéဖြစ်လာ၏မျိုးရှိပါတယ်င်ဟုတစ်ဦးက PVC သေတ္တာစက်ရုံ။ သင်သည်သူတို့၏နည်းလမ်းများသူတို့ကိုလည်းမရှိကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီစေသည်ဟုဆိုကြောင်းပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူရာပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကအောင်မှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် Maestro နေကြောင်းပြောပါတော့မည် PVC / PET / PP ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုး အများအပြားထုတ်ကုန်များအတွက်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တကယ်တော့သက်သေပြဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောဆိုချက်ကိုကို back up အချို့အလားအလာအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်သို့ရကုန်အံ့ ထုပ်ပိုးစက်ရုံ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
1. ကျနော်တို့ထဲကအဲဒီမှာထိပ်တန်း PVC သေတ္တာစက်ရုံတစ်ခုမှာနေ
: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ ကုမ္ပဏီသင်သည်ငှားရမ်းလို?
Starbucks က , Sephora, L’Oreal, Nivea, Durex, and J!NS are justafew of the thousands of names.
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းများတစ် Fortune မဂ္ဂဇင်းကုန်ကျစရိတ်မနေပါနဲ့
မရတိုင်းကုမ္ပဏီဖွင့်ထုပ်ပိုးအပေါ်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သော Dime drop မှနက်ရှိုင်းသောအိတ်ကပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးကကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းအတော်လေးတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်အပေါ်အလုပ်လုပ်နေကြကြောင်းသေးငယ်တဲ့က start-up, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိပါသည်။
ဖတ်ရန် အကောင်းဆုံး PVC ပေ PP ကုန်ကြမ်းပေးသွင်း
သေချာတာပေါ့, ငါတို့ရုံကိုအခြားတူသောငွေရှာနေ အလှကုန်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူ ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ အဆိုပါအမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှန်ဟိုင်းပြေး၌အကြှနျုပျတို့၏စက်ရုံများကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်အရာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် exploit ့အမြတ်ပါစေခြင်းငှါသူတို့ overcharge ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုငှားရမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများလွယ်ကူအောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပလပ်စတစ်စျေးပေါဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များအတွက် PVC / PET / PP ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုး are the most affordable you’re ever going to find. Do yourself and your companyafavor; get our plastic packaging.
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များ, တာရှည်ခံရေစိုခံခြင်းနှင့်အလင်းအလေးချိန်ရှိပါတယ်
ဖတ်ရန် How to Find Reliable Plastic Packaging Box Supplier (10 Tips)
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ PVC သေတ္တာစက်ရုံတွင်အမြဲဆုံးအကူအညီဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုရှိ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Box ကို
က Eleven ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်အကောင်းဆုံး PVC သေတ္တာစက်ရုံဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ပြသသွားရာအတော်လေးမြင့်မားအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရန် How to Design Social Media Shareable Plastic Packaging Boxes?
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PVC / PET / PP ပလပ်စတစ်ပုံး Youtube ကိုမှဗီဒီယိုတခုအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်:
ပလပ်စတစ် PP သေတ္တာ | polypropylene သေတ္တာပေးသွင်း & ထုတ်လုပ်သူ
We havealong-term business relationship with many world famous brands, such as Lock & Lock, Durex, M&G, NIVEA, JINS, SONY, miffy, Belkin, BOSIDENG, Starbucks, LOREAL, ထိုသို့တိုင်း client ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။
Metal Pouch Vs သတ္တု Pouch: တစ်ခုမှာ သာ. ကောင်း၏ Is ဘယ်?
Clear PVC box: Best Option for Product Packaging?
PVC vs ပေ: ပေ သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့် 13 အကြောင်းရင်းများကိုသင်ပြောပြပါ
This entry was posted in ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် tagged အလှကုန်ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန် , Nivea , ထုပ်ပိုးစက်မှုလုပ်ငန်း , PET , PP , PVC , PVC သေတ္တာစက်ရုံ , sephora.
PVC vs. PET vs. PP | Which Material Should I Use for Packaging? 86 views
Metal Pouch Vs သတ္တု Pouch: တစ်ခုမှာ သာ. ကောင်း၏ Is ဘယ်? 15 views
ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများ၏ # 2019 အလှကုန်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုး Trend 13 views